warkii.com » Maalintii ugu farxada badneed Kareena iyo maalintii ugu murugada badneed Karisma maxaa isku beegay sheeko kaa qarsoon!!
Maalintii ugu farxada badneed Kareena iyo maalintii ugu murugada badneed Karisma maxaa isku beegay sheeko kaa qarsoon!!
Feynusta fanka hindiya hadaa maqasho meel dheerba haka raadin waa labadan gabdho walaalaha ah ee nasoo wada madadaaliyeen Karisma Kapoor iyo Kareena Kapoor Khan sigaar ah magacaas waxaa lagu lifaaqa Karisma.
Mowduuca maqaalkeena waxuu yahay maxaa isku beegay maalintii ugu murugada badneed Lolo (Karisma) iyo maalintii ugu farxada badneed Bebo (Kareena) hadaba maalintaas maalin kale ma ahan waa arooskii Karisma Kapoor ee bilawgii qarnigaan caruur iyo ciroolaba Bollywoodka wada xaadireen.
Kareena oo maalinkan noocan ah ka hadleyso waxay hada kahor tiri,”maalintii aniga iyo Saif arooskeena ahaa waxaa iiga farxad badneed maalintii walaashey Karisma arooskeeda ahaa”
Kareena maalintaas farxad weyn ayaa wajigeeda ka muuqday waayo waxuu ahaa arooska walaashed hade gabar walba ayaa kufarxi lahee arooska walaashed balse Bebo farxadeeda wey sii qeexday waxay tiri,”Karisma walaashey oo kaliya ma ahan, waa saaxiibtey, waa macalinkeyga nolosha iyo Role Model-keyga ama qofaan waligey ku dayan jiray dhanwalba.”
Dhanka kale Karisma maalintaas sababte murugo ugu ahed wax kale ma ahan waxay ka fogaaneysay reerkeeda markii ugu horeysay dhaqanka hinduga ahna gabaha marka la guursanaayo wey isku ooyaan Karisma maalintaas waxay ka tageysay hooyadedd iyo walaashe oo ay 29-sano lasoo nooleed waxaa la sheegay markee kala tagayeen inee aad u ooysay Karisma waxay ku sheegtaa maalintii ugu murugada badneed maalintaas.
Balse sida kale waa maalinteeda maalinkaas waayo waa la guursaday inkastoo arooskaas cimrigiisa soo dhamaaday haderna weyba kala tageen iyada iyo seygeeda waana hooyo caruurteeda ku mashquulsan.